Wednesday November 06, 2019 - 08:07:12 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Al-Shabaab ayaa soo bandhigay muuqaalka raggii weeraray 30 September Saldhigga Ciidamada Mareykanka ee Balli-doogle, waxaana muuqaalka ku jira Amiirka Al-Shabaab oo la dardaarmaya raggii weerarka geystay.
"Hadafka ugu weyn ee aan beegsaneyno waa Mareykan, Murtadiin hadda ma dooneyno, waxa aan u socono oo aan hadda beegsaneyno oo intaan dadaal ah loo sameeyey waa Mareykan, waxaana leydinka rabaa inaad howshaas iyada ah sugtaan oo aad Allaah u talo saarataan” ayuu yiri Abuu Cubeyda.
"Madaxdiinu waa kuwa dhidibada u taagay dowlad ku sheeg hamigeedu yahay raaligelinta gaalada, fulinta qawaaniintooda kufriga iyo u hogaansanka shuruucdooda. Hogaanka dowlad ku sheega Federalka ayaa ku faana, fagaarahana la taagan inaysan marnaba shareecada Islaamka ku dhaqmin, dawarsiga shisheeyahana ka doorbidaan ku dhaqanka diinteena suuban” ayuu yiri.
Filimka waxaa ka soo muuqanaya amiirka Xarakada Al-Shabaab Sheekh Axmad Cumar Abuu Cubeyda oo wejigiisa la qariyey. lana arkayo gacmaha iyo qeyb yar oo ka mid ah jirkiisa, wuxuuna hadalo dardaaran iyo sagootin ah u jeedinaya dagaalyahandii fuliyey weerarkii saldhigga Bali-doogle.